Karazan-taratasy fanontana ampiasaina indrindra | Famoronana an-tserasera
Karazana taratasy fanontana
Encarni Arcoya | | dia midika hoe
Raha zavatra hafa no nangatahinay taminao karazan-taratasy ho an'ny fanontana, Ny zavatra mitombina indrindra dia ny zavatra voalohany tonga ao an-tsainao dia ilay taratasy anaovanao pirinty ao an-trano, izany hoe, A4 manodidina ny 80 grama, izay ilay zavatra mahazatra. Na izany aza, eo amin'ny sehatry ny sary dia misy karazany maro miankina amin'ny zavatra tianao hatao pirinty, manomboka amin'ny mahia indrindra, ka hatramin'ny matevina, ary koa ireo variana hafa.
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe inona ny karazana taratasy misy? Ary ahoana no fanasokajiana azy ireo? Manaraka izany dia hiresaka momba izany rehetra izany izahay mba hahazoanao manakaiky an'ity lohahevitra ity.
1 Inona no atao hoe taratasy
2 Karazana taratasy fanontana: ny ilaina
2.1 Milanja taratasy
2.2 Taratasy taratasy
3 Karazana taratasy fanontana
3.1 Taratasy mifono
3.2 Taratasy Couché
3.3 Taratasy nasiana marika
3.5 Taratasy ekolojika
3.6 Taratasy offset
3.7 Taratasy miverina
3.8 Taratasy fametahana tena
3.9 Taratasy famoronana
3.10 Taratasy fatorana
3.11 Taratasy borosy
Inona no atao hoe taratasy
Ny taratasy dia singa iray vita amin'ny kofehy legioma izay nifangaro. Ny fizotrany dia ny fampiatoana ny fibre ao anaty rano mba hivoahan'izy ireo rehefa maina.
Miankina amin'ny akora ampiasaina, ny famaranana, ny lanja, ny fampiharana ... karazana taratasy samy hafa no azo. Ankehitriny, raha ny amin'ireo karazan-taratasy ho an'ny fanontana dia tsy maintsy holazaina fa samy hafa be izy ireo noho ny fampiasana hafa.
Karazana taratasy fanontana: ny ilaina
Alohan'ny hiresahana ireo taratasy fanontana samihafa misy, dia zava-dehibe ny fahafantaranao lafin-javatra roa manavaka azy ireo amin'ny tsirairay: ny lanja, ny firafitra ary ny faran'ny taratasy.
Ity ny lanja isaky ny metatra toradroa amin'ny taratasy, zavatra iray hafa tanteraka amin'ny lanjan'ny taratasy. Safidy tena manan-danja tokoa izy io satria raha manonta amin'ny lanjany tsy marina ianao dia mety ho simba ny vokatra farany amin'ny tetikasanao. Noho izany, miankina amin'ny zavatra tianao hatao pirinty, hanana fitsipi-pitenenana samihafa ianao:
40 ka hatramin'ny 60 grama: ampiasain'ny gazety.
Manomboka amin'ny 80 ka hatramin'ny 100 grama: io no ampiasainao amin'ny birao, ao an-trano, sns. Io no be mpampiasa sy be mpahalala indrindra.
90 hatramin'ny 170: natao indrindra ho an'ny brochures sy / na peta-drindrina.
200-250 gr: mahazatra amin'ny magazine na flyer.
Manomboka amin'ny 250 ka hatramin'ny 350 gr: ho 'tsapanao' amin'ny karatra fandraharahana na karatra paositra ianao. Miorina kokoa amin'ny famoritana.
350-450 gr: saika baoritra no resahina, izay ampiasaina amin'ny fonon'ny boky sy ny sisa.
Ny firafitra dia manondro ny fahatsapana an'io taratasy io. Ohatra, ny taratasy iray dia mety ho marokoroko, na marokoroko, TSY (izay midika fa notampenana hatsiaka), na HP (notsindriana mafana).
Miorina amin'ny firafitra, afaka mahita karazana isan-karazany ianao toy ny:
Taratasy mifono: izay ampiasain'ny magazine, brochure, sns.
Taratasy offset: io no ampiasainao matetika, na ao an-trano izany na any amin'ny birao. Ao amin'ny boky, kahie, sns ihany koa.
Napetraka: taratasy marokoroko nefa mirindra.
Kraft: volontany, ho hitanao ny antsipirian'ny fibre.
Gazety: antsoina koa hoe pirinty, taratasy pulp mekanika io.
Ho fanomezana: ny 'tena izy' dia milanja 100 grama ary vita famirapiratra.
Farany dia manondro ny fijerin'ny taratasy. Miorina amin'ny fahalalana izany raha glossy ny farany (mamiratra) o tsia (vady). Ny tsirairay dia ampiasaina amin'ny fampiasana samihafa. Ohatra, ny famaranana matte dia ampiasaina amin'ny boky ho an'ny pejy anatiny; raha ny glitter kosa no tena ampiasaina eo amin'ny fonony aloha sy aoriana mba hampiavaka ny loko.
Ary ankehitriny, hiresaka aminao momba ireo karazana taratasy fanontana izahay. Na izany aza, ho ela loatra ny filazanao aminao ny safidy rehetra azonao atao. Noho io antony io dia hifantoka amin'ireo izay mahazatra sy fanta-daza izahay hilaza aminao kely momba ny tsirairay amin'izy ireo.
Izy io dia manana famaranana malama sy marevaka, na dia mety ho matte ihany koa aza. Ilay iray ve dia voafidy ho an'ny magazine, karatra fandraharahana, brochures, ary tetikasa misy sary mila valiny miloko tsara izany.
Izy io dia miavaka amin'ny maha kely kely azy, izay midika fa ny ranomainty dia tsy miditra be loatra amin'ny taratasy, ary miloko miakatra ambonin'ny. Inona no atao? Ataovy manaitra kokoa izy io.
Afaka mahazo izany amin'ny glossy sy matte ianao.
Taratasy nasiana marika
Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny taratasy iray miavaka amin'ny fanamaivanana ambonimbony isika. Ohatra amin'izany andraikitra izany ny napetraka, namboarina na maché.
Ity taratasy ity, izay misy 125 sy 225 grama, dia misy famaranana malefaka sy malefaka, avo lenta satria fotsy madio dia madio ary mahatonga ny loko hijanona tsara (na dia manasongadina azy ireo aza).
Io ilay avy any Ala voamarina FSC.
Iray amin'ireo lehibe indrindra fanta-daza noho ny porosity avo, izay mahatonga azy mandray tsara ranomainty. Izy io dia manana famaranana manjelanjelatra sy matte (ity farany mety indrindra amin'ny famakiana lahatsoratra lehibe aminy).
Ny zavatra ratsy fotsiny dia ny loko, rehefa mitroka ny ranomainty, dia somary matroka kokoa.
Ity dia manana fehezan-teny voafetra, satria avy amin'ny 60 ka hatramin'ny 100 grama. Fanodinana, ny lokony dia tsy fotsy matetika, fa moana kokoa, na dia afaka mampiasa akora hanamontsinana azy aza izy ireo.
Taratasy fametahana tena
Tsy toy ny karazana taratasy fanontana hafa, ity iray ity dia miavaka amin'ny fananana lafiny iray amin'ny kasety lakaoly. Noho izany dia amboarina amin'ny lafiny iray fotsiny izy ary manompo, manala ny taratasy miaro amin'ny hafa, hametahana azy amin'ny faritra samihafa.
Izy io dia karazana taratasy misy lanjany sy firakofana samihafa, ary koa hateviny. Mifantoka amin'ny tetikasa avo lenta, izay te hampita fihetseham-po amin'ny endriny. Noho izany, mahazatra ny mahita azy amin'ny fanasana, karatra fandraharahana, taratasy fametahana, afisy ...
Ity taratasy ity dia manana lanjany ambany mavesatra, fotsy madio, nefa misy loko ihany koa. Amin'ny ankabeazan'ny trano, io andraikitra io dia matetika an-trano.
Ity taratasy ity dia fantatra amin'ny anarana hoe "cardstock". Taratasy io zavatra mafy noho ny ravin-taratasy, miloko matetika, nefa tena mamolavola, satria mamela azy hiondrika, hanapaka sns.
Araka ny hitanao dia maro karazana ny taratasy fanontana. Ny tolo-kevitra tsara indrindra azonay omena anao amin'ny anao dia ny, rehefa manonta, manontania hoe inona no safidy tsara indrindra arakaraka ny karazana tetikasa anananao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Karazana taratasy fanontana
Top 5 mpanova litera mahafatifaty
Ahoana ny fanesorana ny fiarovana amin'ny PDF